कतै सोसल मिडियाको एडिक्ट हुनु भएको त छैन ?
काठमाडौं । हरेक मानिसको जीवनमा सामाजिक सञ्जालको प्रवेश र प्रयोगले सूचना आदानप्रदान गर्ने शैलीमा आमुल परिवर्तन ल्याइदिएको छ । साथै यसले हाम्रो सामाजिक अन्तरक्रियालाई पनि बढाइदिएको छ । तर प्रयोग गर्ने क्रममा हामी सामाजिक सञ्जालको एडिक्ट भएका त छैनौ ? कसरी थाहा पाउने त यस प्रकारको एडिक्शन वा आसत्तिलाई ?
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेक्रममा यी १० लक्षण देखिए भने हामी यसको फन्दा वा एडिक्शनमा परेका छौ भन्ने जान्नुपर्दछः
१.उठ्ने वित्तिकै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेमा
अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा केही कुरो छुटिहाल्यो कि भनेर जतिबेला पनि आफ्नो ल्यापटप तथा मोवाइलमा यी सञ्जाललाई अन गरेर राखेका हुन्छन् । फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य सोसल साइटमा छुटेको कुरालाई हेर्ने कार्य विहान उठ्ने वित्तिकै शुरु हुन्छ । अनि राती नसुतिञ्जेलसम्म जारी रहन्छ ।
२.जहाँ पायाे त्यही फेसबुक, ट्विटर प्रयोग गरेमा
फुर्सदको बेलामा सामाजिक सञ्जालमा के भइरहेको छ भनेर हेर्नु र जानकारी लिनु राम्रै कुरा हो । तर घरबाट बाहिर निस्कने वित्तिकै जुन ठाँउमा पनि मोवाइल वा ल्यापटप लिएर फेसबुक, ट्विटर तथा इन्टाग्राममा व्यस्त हुने कार्य निकै खतरनाक मानिन्छ । यसले सामाजिक सञ्जालले गर्दा कति असामाजिक हुनुभएको छ भन्ने कुरा अरुलाई बुझ्न लामो समय लाग्दैन । यसबाहेक यस्तो बानीले तपाईको कार्यक्षमतालाई निकै घटाउँछ । त्यसैले यस्तो क्रियाकलाप गर्नु भनेको तपाई सामाजिक सञ्जालको एडिक्ट हो भन्ने जनाउँछ ।
३. घण्टौंसम्म अनावश्यक कुरा हेरेमा
सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने मानिसको एउटा कमजोरी भनेको कुनै पनि कामलाई पर धकेल्ने हो । आफूलाई आवश्यक नपर्ने कुरा जस्तै भूपू प्रेमिकाले पोष्ट वा अनावश्यक फोटो हेर्नु भनेको समय मूल्यवान छ भन्ने कुरालाई वेवास्ता गर्नु हो । यो एडिक्शनको अर्को लक्षण हो ।
४.अनावश्यकरुपमा सेल्फी लिन समय खर्च गरेमा
फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्ने हरेक मानिसलाई एउटा कुराले सताएको हुन्छ । त्यो भनेको कस्तो सेल्फी खिचेर अपलोड गर्ने होला भन्ने हो । खतरनाक ठाँउमा खिचिएका दुर्लभ हुन् या फुर्सदमा लिएका सामान्य सेल्फी हुन्, सबै खालका सेल्फी लिदा हरेक मानिस निकै ध्यान दिने र निकै समय खर्चने गर्दछ । सेल्फी लिदा समयको अभाव छ कि छैन वा साथीहरुलाई हतार भएको छ कि छैन भन्ने कुराको कुनै मतलव हुदैन । अनि अरुलाई मन परोस् कि नपरोस्, यसरी लिएको सेल्फी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिहालिन्छ । सेल्फीप्रतिको यस्तो आसक्तिले हामीलाई एडिक्ट बनाइरहेको हुन्छ । यसले हामीलाई चाहिने भन्दा बढी व्यक्तिवादी वा आत्मकेन्द्रित बनाउँछ जसले गर्दा तपाईमा मपाईको भावना बढ्न जान्छ ।
५. जतिबेला पनि नोटिफिकेशनको कल्पना गरेमा
सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने मानिस नयाँ सुचना पाउँदा उत्तेजित हुने गर्दछन् । नयाँ सूचना वा नोटिफिकेशन आउँदा यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु मानव स्वभाव नै हो । तर जतिबेला पनि नयाँ सुचना आउँछ कि भनेर सोच्नु भनेको एडिक्शनको लक्षण हो । यस प्रकारका एडिक्टले बज्दै नबजेको मोवाइलफोनको भाइब्रेशन वा टोन पनि बजे जस्तो लाग्ने अनि केही नयाँ कुरा आइहाल्यो कि भनेर हतारहतार हेरिहाल्ने गर्दछन् । तर त भाइब्रेशन वा टोन नै बजेको हुन्छ न कुनै नोटिफिकेशन आएको हुन्छ । विश्वभर यस प्रकारको भ्रम वा ह्यालुसिनेशनबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु ग्रसित भएको पाईन्छ ।
६. सामाजिक सञ्जाल नै सम्पर्कको एकमात्र माध्यम बनेमा
फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्टाग्रामका एडिक्टहरु साथीभाईलाई प्रत्यक्षरुपमा भेटेर सम्पर्क गदैनन् । प्रत्यक्ष भेटघाटको ठाँउ सामाजिक सञ्जालले लिने गर्दछ । तर यसले साथीभाईसँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्दछ भन्ने ख्याल त्यस्ता मानिसलाई हुदैन ।
७. मनोरञ्जन तथा ज्ञानका अन्य साधनलाई महत्व नदिएमा
कुनै महत्वपूर्ण किताव पढेको वा फिल्म वा टिभी शो हेरेको केही समयपछि नै तपाईको ध्यान सामाजिक सञ्जालतिर गइहाल्छ । कुनैपनि साधनले तपाईको ध्यान सामाजिक सञ्जालले जति तान्न सक्दैन । सामाजिक सञ्जाल नै मनोरञ्जन तथा ज्ञानको साधन बनिदिन्छ ।
८.लाइक र कमेन्टबारे चाहिनेभन्दा बढी चासाे दिएमा
आफ्नो पोष्ट वा स्टेटसमा कति लाइक वा कति कमेन्ट भए भन्ने कुराले हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जीवनमा निकै ठूलो महत्व राखेको हुन्छ । अझ आफूले मेहेनत गरेर खिचेको सेल्फीमा लाइक बढेमा त सबै कुरा पाए जस्तो लाग्दछ । यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालप्रतिको आशक्ति बढ्दै जान्छ । लाइक र कमेन्ट बढ्दै गएपछि तपाई अरुबढी व्यस्त र एडिक्ट हुनुहुन्छ ।
९.इन्टरनेट र वाईफाई नभएको ठाँउ शून्य लाग्दछ
जीवनमा धेरै नराम्रा घटना घट्न सक्दछन् अनि मानिस निराश हुन्छ । यस्ता नमिठा अनुवभका बेला जीवन शुन्य र निरस लाग्दछ । तर ‘ नो वाईफाई’ भन्ने संकेत लेखेको ठाँउ सोसल मिडियाको फन्दामा परेका जेनेरेशनका लागि अन्य तीता घटना जस्तै शुन्य र निरस बन्छ । त्यसैले यस्ता एडिक्टलाई वाईफाई नभएको ठाँउ वा भवनमा जानु भनेको जीवनको अर्थ नै सकिए जस्तो लाग्दछ ।
१०. कस्तो स्टेटस हाल्ने भन्ने कुराले दिमाग नै खाएमा
कस्तो सेल्फी पोष्ट गर्ने होला भन्ने कुरा छान्न कठिन भएझैं कस्तो स्टेटस हाल्ने होला भन्ने कुरा छान्न पनि निकै कठिन हुन्छ । अरुलाई सामान्य लाग्ने स्टेटसलाई पनि पटक पटक लेख्ने, मेट्ने र सच्याउने काम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको धेरै समय खाएको हुन्छ । यो एडिक्शनको अर्को लक्षण हो ।